Module Nchaji Ev, Ev Dc Module Nchaji, Ev Charger Module - UUGreenPower
IP65 High Protective Modul
Igwe mkpuchi mkpuchi mkpuchi elu IP65 na-anabata teknụzụ ọkụ ọkụ kachasị ọhụrụ yana teknụzụ mgbasa ọkụ, ma emebere ya nke ọma maka ikpo ọkụ ọkụ dị elu nke mpụga nke ụgbọ ala eletrik.Ọkwa nchebe gburugburu ebe obibi ruru IP65, nke nwere ike ime mgbanwe na gburugburu ebe dị njọ dị ka uzuzu, uzuzu nnu na condensation.
UBC 75010 bidirectional V2G odori ikpo ọtụtụ-eji na Nchaji na ume nzaghachi n'etiti electric njem ụgbọ ala na ike okporo .Its ngwa uru dabeere na-egbo kwa ụbọchị odori nke electric njem ụgbọ ala, na n'ụzọ dị irè na-egwu ọrụ nke electric ụgbọ ala batrị ike nchekwa unit, na-aghọta. Nchaji grid ọkụ n'usoro, njikwa akụkụ ike chọrọ, uru agbakwunyere nke obere grid na ịntanetị ike.
UR100030-SW EV modul chaja emepụtara nke ọma maka chaja EV DC.Ọ nwere oke voltaji nke mmepụta ike mgbe niile.Ọzọkwa ọ nwere nnukwu ike ihe, elu arụmọrụ, elu ike njupụta, elu ntụkwasị obi, ọgụgụ isi akara na mara mma ọdịdị mma.Usoro njikwa dijitalụ na-ekpo ọkụ na nke nwere ọgụgụ isi na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gbochie ọdịda ma hụ na ntụkwasị obi dị elu.
UR100020-SW EV modul chaja emebere nke ọma maka chaja EV DC.Ọ nwere oke voltaji nke mmepụta ike mgbe niile.Ọzọkwa ọ nwere nnukwu ike ihe, elu arụmọrụ, elu ike njupụta, elu ntụkwasị obi, ọgụgụ isi akara na mara mma ọdịdị uru.Usoro njikwa dijitalụ na-ekpo ọkụ na nke nwere ọgụgụ isi na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gbochie ọdịda ma hụ na ntụkwasị obi dị elu.
Igwe nleba anya nleba anya umev04 nwere ihuenyo mmetụ agba LCD ma nwee interface mmekọrịta mmadụ na kọmpụta ahaziri iche.Emebere ya nke ọma maka ọkọlọtọ European na ọkọlọtọ Japanese nke ịchaji ụgbọ ala eletrik.Ọ na-akwado CCS + CHAdeMO + AC, CCS + GB / T + AC, CCS + CHAdeMO + GB / T, wdg.
GỊNỊ mere ị ga-eji họrọ
Anyị kwenyere na okike bụ naanị ngwa ọgụ dị ike maka inweta nsonaazụ dị mma.
Na anyị ga-eji ihe e kere eke n'oge dum ngwaahịa emebe ọrụ.
Ndị otu R&D ọkachamara
Ekwenyere ịbụ onye na-ebubata isi akụrụngwa maka ọdụ chaja kacha mma.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke ahụmahụ mmepe
Mgbakọ nke teknụzụ ike DC n'ime afọ iri abụọ gara aga etinyela ntọala siri ike maka mmepe ugbu a.
Nhazi ohuru ohuru
Anyị na-aga n'ihu n'ichepụta ọhụụ ma na-agbalị ịmepụta usoro modul chaja kacha mma maka ọdụ chaja dị ukwuu.
Nkwa ọrụ dị mma
Anyị na-enye bụghị nanị na-eche echiche tupu ire ọrụ, kamakwa elu àgwà nke mgbe-ire ọrụ.
● IP65 elu nchebe cha ...
● Nfefe bidirectional...
Ultra elu arụmọrụ: na ...
● Ultra elu arụmọrụ: t...
Ihe UMEV04 DC Na...
Lekwasị anya na ihe ọhụrụ ọkụ eletrik, dozie isi nsogbu ahụ.
Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd, guzosie ike na 2015, na-agba mbọ ịghọ onye na-eweta ihe kachasị mma nke isi ihe maka ọdụ ụgbọ mmiri.Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ elektrọnik R & D ndị ọkachamara, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke mkpokọta teknụzụ ike DC, site na imepụta ihe ọhụrụ, iji mepụta usoro 40kW, 30KW, 20KW, 15KW super cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha.
Shenzhen UUGreenPower na-agbaso ndị ahịa gbadoro anya, echiche ọkachamara, na-elekwasị anya na mmepụta teknụzụ eletrik ike, na-edozi isi okwu nke ndị ahịa, na-eto eto na ndị ahịa, na ijikọ ọnụ na-akwalite ume ndụ ndụ na obere carbon carbon nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala eletrik.
Inductors dị elu maka ikpo ọkụ ụgbọ ala eletrik!
Inductance eji maka ikpo ọkụ ụgbọ ala eletrik dị elu;Ihe mkpuchi ọla dị ka cuboid, square magnetik core ahaziri na casing, axial direction nke magnetik core dị ka obosara nke casing, na akụkụ abụọ na-emegide nke magnetik core na-ekewa wee merụọ na Abụọ ...
Ụgbọ ala eletrik V2G teknụzụ
Igwe ọkụ eletrik dị ugbu a adịghị arụ ọrụ nke ọma, n'ihi na nke mbụ, ọnụ ahịa ya dị elu, na nke abụọ, ọ dị mfe ime ka mkpofu.Akụkụ nke nsogbu a na-akpata site na nnukwu mgbanwe na-achọ ibu na-eme na mkpa voltaji na nhazi oge nke okporo.Mgbe grid chọrọ karịa ...
Uru nke ụgbọ ala ume ọhụrụ
Site na ịrị elu nke ọnụ ahịa mmanụ, ọnụahịa nke iji ụgbọ ala kwa ụbọchị abawanyela, na uru nke ụgbọ ala ike ọhụrụ dị adị, ha nwere ike ịnụ ụtọ obere mmanụ ọkụ na uru dị iche iche nke ike ọhụrụ;ha nwere njirimara nke chaja ngwa ngwa na ogologo ndụ batrị Enwere ike ịkpọ ya panacea ka s ...
Ogologo oge ole ka ndụ batrị ike ọhụrụ dị
Batrị ụgbọ ala ume ọhụrụ ugbu a bụ batrị lithium ternary ma ọ bụ batrị lithium iron phosphate.Nke ikpeazụ nwere ogologo ndụ.Enwere ike ịkpọ ha abụọ "batrị lithium".Enwere isi ihe abụọ maka ịlele ndụ batrị nke ụgbọ ala ume ọhụrụ: ihe ...
Ụkpụrụ nke batrị ụgbọ ala ike ọhụrụ
Batrị lithium ike na-abụkarị nke electrodes dị mma, electrodes na-adịghị mma, electrolytes, separators, wdg, na-achọ njupụta ume dị elu, ogologo ndụ, ntụkwasị obi na nchekwa.Ụkpụrụ ọrụ ya bụ na mmegharị nke electrons na-apụta site na mmeghachi omume kemịkal n'etiti pos ...